နေရောင်က ဖျော့ဖျော့လေးသာ ကျနေသည်။ အားပြိုင်လာသော တိမ်တိုက်များကို မကြာမီ အလျော့ပေးရတော့မည် ဆိုသည်ကို သိသော်လည်း လွယ်လွယ်နှင့် အရှုံးမပေးလိုက်ချင်။ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ တိမ်ထုကြီးကို ထိုးဖောက်ပစ်လိုက်ချင်သေး၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ခဲသားရောင် တိမ်အထပ်ထပ်အောက်မှ နေခြည်မျှင်လေးများက ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ။
ဖြတ်တိုက်လာသော လေညှင်းလေးထဲတွင် မိုးငွေ့အချို့ ပါလာသည်။ မုန်တိုင်းမထန်ခင် ငြိမ်သက် နူးညံ့နေသော ရှုခင်းက သူ့ကိုလှည့်စားလေ၏။ မိုးမရွာခင်တော့ ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ထားလိုက်ချင်သေးသည်။ လေပြေလေးက တိုးတိုးသာသာ ပြောသော စကားသံကို သူနားထောင်ချင်သေး၏။ အိမ်ရှေ့သစ်ပင်တွင် ခေါင်းကိုငဲ့ကာငဲ့ကာဖြင့် နားနေသော ငှက်ကလေးကို သူငေးကြည့်နေမိသည်။ နွဲ့နွဲ့လေး တိုက်နေသော လေညှင်းက သစ်ရွက်လေးများကို လှုပ်ခတ်စေသည် ဆိုရုံလေးမျှသာ။ ကြည့်နေရင်းပင် သစ်ရွက်ပေါ်သို့ မိုးပေါက်ကလေးများ ကျလာသည်။ တစ်ပေါက်…နှစ်ပေါက်…သုံးပေါက်….။ သူဆက်၍ မရေတွက်နိုင်တော့။ မိုးပေါက်များကို ရေကြည့်ရန် ကြိုးစားသော သူသည် အရူးတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ချေတော့မည်။
ခပ်ကျဲကျဲနှင့် မှန်မှန်လေး ဖွဲဖွဲ ကျရာမှ ထုကြီးထည်ကြီးသို့ ပြောင်းချင်လာသည်။ စိပ်လာသော မိုးပေါက်တို့သည် သစ်ရွက်လေးများကို အညှိုးတကြီး ပင် မှန်မှန် ရိုက်ခတ်နေတော့၏။ မိုးပေါက်တို့သည် သွက်လက်စွာ၊ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာ၊ အပူအပင်မဲ့စွာပင် မြေကြီးပေါ်သို့ ခုန်ဆင်းလာကြသည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးတို့ကြား အဆီးအတား မဲ့လှသည်။ ငှက်ကလေးသည်လည်း ဘယ်ဆီသို့ ပျံပြေးသည် မသိ။ မိုက်မဲလှသော မိုးပေါက်တို့သည် မြေကြီးပေါ်ရောက်သည်နှင့် ဗွက်အိုင်၊ ရေအိုင်တို့ထဲ ရောနှော ပျောက်ကွယ်ရလေပြီ။ ကံကောင်းသော မိုးပေါက်အချို့ကတော့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ရေကန်ကြီး၏ ရင်ခွင်သို့ ၀င်ခွင့်ရကြလေသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ သူတို့၏ ဖြစ်တည်မှုက တိုတောင်းလွန်းလှပါသည်။
မကွယ်ပျောက်သွားမီတော့လည်း သူတို့၏ အစွမ်းကို ပြခဲ့ချင်သေးဟန် တူ၏။ ကန်ရေပြင်တွင်တော့ ၀ဲဂယက် ထင်စေခဲ့သေးသည်။ သွပ်ပြားပေါ်မှာ၊ ပြတင်းပေါက်မှန်မှာ…။ မိုးပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းစီ၏ အဆုံးသတ်ကို သူကြားရသည်။ ဖျော့တော့ရာမှ တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လောင်လာသည်။ တစ်ပေါက်ချင်းစီ၏ ရိုက်ခတ်မှုသည် တေးသွားတစ်ပုဒ်၏ နရီလို၊ စည်းလို မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန်လာသည်။ မြန်ရာမှ ထန်လာသည်။ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ပင် ပီသလာသည်။ စစ်ချီသံတွေလိုလား၊ မြင်းခွာသံတွေလိုလား။ ဒေါသကြီး၏။ ခက်ထန်၏။ အညှာအတာမဲ့ပြန်လေ၏။ တစ်ချီတစ်ချီမှာတော့ အားမတန်၍ မာန်လျော့ လေရသော ဟန်ဖြင့် တိုးညှင်းသွားပြန်သည်။ သို့ပေမယ့်လည်း မကုန်သေးသော အင်အားဖြင့် အစဉ်တစိုက် သွန်ချနေဆဲ။
တခဏလွန်မြောက် ပြန်လျှင်တော့ မတည်မြဲသော နိယာမအတိုင်းပင် မိုးစက်တို့လည်း ဝေးလွင့်ရလေပြီ။ ကောင်းကင်ကြီးသည် အငိုတိတ်စ ကလေးတစ်ယောက်လို ရှိုက်ကာ ငင်ကာဖြင့် နောက်ဆုံး မျက်ရည်စက်တို့ကို ကြိုးစား၍ ထိန်းနေရှာ၏။ အငို၏ နောက်မှ အပြုံး၊ အမှောင်၏ နောက်မှအလင်း၊ ၀ဲဂယက်များ၏ နောက်မှ ငြိမ်သက်ခြင်း။ ရှိုက်ရင်း ရှိုက်ရင်းနှင့်ပင် အငိုတိတ်ရပေတော့မည်။
ကောင်းကင်သည် တဖြည်းဖြည်း ပြန်၍ ပြုံးလာ၏။ ရေမစို့တစိုနှင့် လောကသည် ကပိုကရို လှနေတော့သည်။
(Chopin ၏ Raindrop (Prelude Op. 28, No. 15) ကိုခံစား၍ ရေးပါသည်။)
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:07 No comments:
ဘယ်တော့မှ မ၀င်တော့ပြီဟု ထင်ရသော ဈေးဆိုင်တန်းသို့ ၀င်ရပ်မိလေပြီ။ ခုတလော မှန်ကြည့်ဖြစ်လျှင် မျက်စိအောက်က နေရာကိုသာ မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်။ ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလကစ၍ ပေါ်လာသည် မသိသော အရေးအကြောင်း တချို့ကို မှန်နားကပ်လျက် ဘယ်ဖက်လှည့်ကာ၊ ညာဖက်လှည့်ကာ ကြည့်၏။ အရေးအကြောင်းတို့က ယခုလို ကိုယ်ထင်ပြလာတော့လည်း မေသီတစ်ယောက် ပြင်ပအကူအညီယူရတော့မည်ရယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတော့သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် ဈေးဆိုင်၏ ထိုနေရာသို့ ရောက်လာရလေပြီ။ တကယ်တော့ တစ်သက်လုံးက သနပ်ခါးနှင့် အသားမပတ်ရုံ မျက်နှာလိမ်းဆေးရည်သာ လိမ်းခဲ့သည်မို့ ဘယ်ကစ၍ ဘာကိုဝယ်ရမည် မသိ။ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ anti-wrinkle, anti-oxidant လို့ဆိုသည်ပဲ။ ပုလင်းသေးသေးနှင့် ကြီးလှသော ဈေးများက ဘာမှမဟုတ်သလိုပင် ၀ယ်သူတွေကတော့ ၀ယ်နေကြ၏။ ဒီအချိန်ကို ဘယ်လိုရောက်ခဲ့သည်ရယ်လို့ မေသီ မမှတ်မိ။ လွန်ခဲ့သော ဆယ့်ငါးနှစ်ဆိုသည်မှာ ကြိုးပြတ်သွားသည့် စွန်လေးတစ်ကောင်လို မျက်စိရှေ့ကနေ ဝေးဝေးသွားခဲ့ပြီ။
အာရှတိုက်သားများက နုပျိုလှသည်ဟု မေသီ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ နိုင်ငံခြားသားအများစုက အထင်ရောက်ပြီးသားပင်။ လူကောင်ထွားထွား အနောက်နိုင်ငံသားများကြား သည်လို အထင်ခံရသည်မှာလည်း မဆန်းလှ။ နှစ်အစိတ်ကျော်လို့ သုံးဆယ်ဖက်ဦးတည်သည့် အချိန်တုန်းကပင် မေသီ့ကို ကောလိပ်ကျောင်းသူနှင့် မှားလားမှားရဲ့။ ဆယ့်ငါးနှစ် ဆယ့်ခြောက်နှစ်လို့ ဆိုလာသူများကိုတော့ ပိုလွန်းပြီဟု ငြင်းဆန်သော်လည်း စိတ်ထဲက ကျိတ်၍ကျေနပ်စမြဲ။ အသက်အမှန်ကို ဆိုလျှင်ပင် ညာနေတာပါလို့ စချင်သည့် သူများကလည်း ရှိသေးသည်။ တကယ်တော့ မေသီက အသက်အမှန် ဖွင့်ပြောရသည်ကို ၀န်လေးနေမည့် မိန်းမတော့ မဟုတ်။ အသက်အမှန်ကို ပြောခြင်းဖြင့် သူဘယ်လောက်နုကြောင်းကို မော်ကြွားချင်သည်လည်း ပါမည်ပေါ့ရယ်လို့တော့ မေသီ့ကို အပြစ်မဆိုသာ။
ခုတော့ စိတ်ကြီးဝင်နေသော မေသီ့ကို ဘယ်အချိန်ကမသိ ၀င်လာသော ဇရာက ကိုယ်ထင်ပြလာလေပြီ။ အခုတလော ခုနစ်နှစ်၊ ရှစ်နှစ် အရွယ်ကလေးတွေ၏ အန်တီဟူသော ခေါ်သံက နားထဲကို ကန့်လန့်ဝင်တတ်လေသည်။ ခုနှစ်နှစ်လောက်သာ ငယ်သော မောင်လေး၏ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းပေါ်မှာ အန်တီလို့ ခေါ်လိုက်သည့်အခါမှာတော့ စိတ်တို၍ မဆုံး။ အခုတလော အရောင်ရင့်ရင့်တွေဝတ်တာကို ရှောင်နေလိုက်သည်။ အရောင်ရင့်တွေက လူကို ရင့်စေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဒီနေ့တော့ ရောက်တတ်ရာရာ စဉ်းစားရင်း လမ်းလျှောက်လာသည်မှာ ဘဏ်ကိုပင်ရောက်လာတော့သည်။ စာရေးမလေးက ငွေထုတ်ဖို့ ကူညီနေတုန်း ဖော်ဖော်ရွေရွေပင် စကားပြော၏။
“စာမေးပွဲတွေ နီးလာပြီနော်။ စာသင်နှစ်လည်း ကုန်တော့မယ် ဆိုတော့ ကျောင်းပိတ်တော့မှာပေါ့။”
“ရှင်…သြော် ကျွန်မက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ မဟုတ်တော့ဘူး ရှင့်။”
မေသီ အံသြကျေနပ်စွာနှင့်ပင် ပြန်ဖြေ၏။
“ဟုတ်လား။ အစ်မကို ကြည့်ရတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး မှတ်လို့။ မှားသွားတာ။”
“ရပါတယ်။ အမှားကောင်း လို့ပဲ ယူဆလိုက်ပါမယ် ဟင်း…ဟင်း။”
မှန်တံခါးကို တွန်းပြီးထွက်လာတော့ ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ်ပြန်မြင်ရသည်။ ဆံပင်အလွှာပုံ၊ နားဆွဲ မျှင်မျှင်၊ ချည်သားလက်တို ဂါဝန်ကို ခါးပတ်သေးသေးလေးနှင့် ၀တ်ထားသော မေသီ့ကို ဘယ်သူက အသက်သုံးဆယ်နှစ်နှစ်လို့ ထင်မည်လဲလေ။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း လောကကြီးက လှပလို့နေသည်။
သမားဆို အိုမှ ဆိုသည့် စကားကို ကြားဖူးသော်လည်း တစ်ခါမှ အလေးအနက် မစဉ်းစားဖူး။ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လည်း မှန်သားဟု တွေးမိသည်။ ဒါပေမယ့် သမားအိုတို့ဟာလည်း တချိန်ကတော့ ပျိုခဲ့တာပါပဲလို့ စုသက် အထွန့်တက်ချင်ပါသည်။ အခုတော့ စုသက် ကြုံနေရသော အတွေ့အကြုံကို ပျိုရွယ်သော သမားတိုင်းကြုံရမည် ထင်၏။ သုိ့ပေမယ့် စုသက်အတွက် ပိုသော အတွေ့အကြုံကတော့ စုသက်သည် သက်တူရွယ်တူ အတော်များများထက် ပိုငယ်သည့်ပုံပေါ် နေခြင်းပါပဲ။ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း၊ ပါးဖောင်းဖောင်းနှင့် စုသက်ကို မသိသူတော်တော်များများက အထက်တန်းကျောင်းသူဟု ထင်ကြသည်။ လူကောင်ကလည်း သေးကာ အရပ်လည်းပုသည်မို့ အားကိုးချင်စရာမရှိဟု သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းစကြသေး၏။
ဆေးကျောင်းဆင်းကာစ ဆရာဝန်ပေါက်စဘ၀သည် ကျောင်းသူဘ၀ ပြန်ရောက်သွားသလိုပင်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိသည့် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ဆေးရုံမှအမှုထမ်း အတော်များများက ကိုယ့်ထက် အတွေ့အကြုံများကြသူတွေချည်းသာ။ House surgeon ဆင်းကာစက လူနာတွေရှေ့ရောက်လျှင်ပဲ ပေါက်ကရမလုပ်မပြော ရအောင် သတိထားနေရ၏။ ဒီကြားထဲမှာ အချို့လူနာတွေက စုသက်ကို ဆရာဝန်လို့ပင် မထင်ကြ။ ဆေးရုံမှာ လာစောင့်သော လူနာတစ်ယောက်ယောက်၏ သမီးလို့ ထင်လိုထင်။ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတို့နှင့် လိုက်လာသော ကလေးမတစ်ယောက်လို့ ထင်လိုထင်။ ကသိကအောက် နိုင်လှသည်။ ကိုယ့်ထက် အတန်းငယ်သူများကလည်း စုသက်ကို သူတို့နှင့် အတန်းတူလို့သာ ယူဆကြ၏။
ထို့ကြောင့်ပင် ကိုယ်လုပ်နိုင်သည့် အပိုင်းဖြစ်သော အ၀တ်အစား အပြင်အဆင်ကို ဂရုစိုက်ရပေ၏။ အရင်တုန်းက ၀တ်လေ့ရှိသော တီရှပ်အရောင်စုံလေးများအစား လူကြီးဆန်သော ဘလောက်စ်အင်္ကျီ၊ ရင်စေ့အင်္ကျီဝမ်းဆက်များကိုသာ ၀တ်ဖြစ်တော့၏။ အရောင်ကိုလည်း ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ခပ်ရင့်ရင့်များသာ ရွေးချယ်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်ရှည်ကိုလည်း ထုံးရပြန်၏။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ ပုံစံလောက်တော့ ဖြစ်လာ၏။ ပြီးတော့ နည်းနည်းထူသော ကတ္တီပါဖိနပ်ကိုစီးကာ လူကြီးဂိုက်ဖမ်းနေလိုက်သည်။
“ဆရာမ ကျွန်မအမေ မောနေလို့ လာကြည့်ပေးပါဦး။”
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဆေးရုံထဲမှာလှည့်နေသော စုသက်ကို အပြေးအလွှားလာခေါ် ရှာ၏။ မိန်းကလေးနောက်ကို အပြေးလိုက်လာရင်း လူနာကို စမ်းသပ်ပေးရင်းနှင့် တစ်နေ့လည်လုံး အလုပ်ရှုပ်နေတော့၏။ အခုလိုလူနာတွေက အားကိုးတကြီး အထင်တကြီးရှိသည် ဆိုလျှင် အဖွားကြီး ပုံပေါက်မည်ဆိုလည်း ပေါက်ပါစေတော့။ စုသက်ကျေနပ် နေမည်သာ။
“ဖွားစောက နုတယ်နော်။ အသက်ခြောက်ဆယ်လောက်ပဲ ထင်ရတာ။”
ရှစ်ဆယ်နားနီးပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဖွားစောဆံပင်အချို့က နက်မှောင်နေဆဲ။ သွားတို့က ခိုင်မာဆဲ။ ဇရာကို မလွန်ဆန်နိုင်သော လူတို့၏ သဘောသဘာဝ အတိုင်းမျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတို့က ထင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အသက်အရွယ်နှင့် စာလျှင် တိမ်လှသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ငယ်ငယ်ကပင် အသားအရေ စိုပြည်ပြီး လှပသူမို့ ယခုအသက်ကြီးသည် အထိလည်း ကြည့်ကောင်းနေဆဲ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လည်း နေတတ်သူမို့ လူတိုင်းက ဒေါ်စောကို ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ဟု မထင်ကြ။ အကြောင်းသိပ်မသိသည့် လူအချို့က ဆိုလျှင် ဒေါ်စော၏ သမီးကြီးကို ဒေါ်စောနှင့် ညီအစ်မတော်သည်ဟု ဆိုကြသေးသည်။
“ဖွားဖွားက သိပ်နုတာပဲ။ ဘာတွေလုပ်၊ ဘာတွေစားလို့လဲဟင်။ လျှို့ဝှက်ချက်လေး ဘာလေး ပြောပြပါဦး။”
သမီးကြီးမှ မွေးသော မြေးမအကြီးဆုံးမြိုင်က စိတ်ကူးပေါက်လျှင် အနားကပ်ကာ မေးတတ်သော မေးခွန်းဖြစ်၏။ မြိုင်ဆိုလျှင်ပင် အသက်သုံးဆယ်နားသို့ ဦးတည်နေပေပြီ။ ဒီလိုဆိုတော့ ဖွားစော ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော နှစ်ပေါင်းက မနည်းတော့ဟု ကိုယ့်ဟာကိုယ် တခါတလေ ဆင်ခြင်မိသည်။ ဂျပန်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ပြီးခေတ်တို့ကနေပြီး အင်တာနက်ခေတ်၊ chatting ခေတ်ကိုရောက်လာသည်မှာ တွေးကြည့်တော့လည်း အံ့သြစရာပင်။ ၀မ်းနည်းစရာ၊ ၀မ်းသာစရာတွေ အမျိုးမျိုးအထွေထွေကို ကြုံခဲ့ပြီးပြီ။ သမီးတို့အဖေကြီးကတော့ အဖွားလောက် ကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပင် ဆိုရမည်လား။ အသက် ခြောက်ဆယ်နားနီးချိန်မှာပင် ဆုံးသွားခဲ့သည်။ အိုခြင်း၏ ဒုက္ခတွေကို ကြာရှာမခံစားရဘူးဟုသာ အဖွား တခါတလေတော့လည်း ဖြေတွေးတွေးချင်သည်။
အခုတော့ အဖွားမှာ ရောဂါကြီးကြီးမားမား မရှိလှသော်လည်း ဇရာဆိုသည်ကတော့ လူတို့ကို အနိုင်ယူစမြဲ။ အသက်ငယ်တုန်းက ယောက်ျားနှင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ စီးပွားရှာခဲ့သော မစော၊ လုပ်စရာရှိလျှင် စိတ်မြန်လက်မြန်နှင့် လုပ်တတ်သော မစော၊ သွက်လက်ချက်ချာ၍ စိတ်ထက်လှပါသည်ဟု အများက သတ်မှတ်ကြသော မစော။ အခုတော့ ထိုင်ရာက ထဖို့၊ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုယူဖို့ အတွက်ပဲ မြေးမတွေကို အားကိုးနေရ၏။ အရင်က အားလပ်ချိန်တိုင်း စာဖတ်ခဲ့သလို အခုကောင်းကောင်း မဖတ်နိုင်တော့။ မျက်စိက မကောင်းတော့သလို အာရုံလည်း ကြာကြာ မစိုက်နိုင်။ အိမ်ထဲမှာ လျှောက်နိုင်သွားနိုင်နေသော်လည်း အရင်ကလို မသွက်လက်တော့။ ဖွားဖွားကလည်း မြန်မြန်လျှောက်ပါဟု အလိုက်မသိတတ်သော မြေးမ အငယ်လှိုင်က တခါတလေ ဆိုတတ်သေးသည်။ နင်တို့ အသက်ကြီးတော့ သိလိမ့်မယ်ဟု အဖွားကဆိုမှပင် သမီးကြီးက လှိုင့်ကို တိတ်တိတ်ကြိတ်၍ ဆူတော့သည်။
အဖွားနုလှပါသည်ဟု ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော အဖွားကတော့ မှန်မကြည့်ဖြစ်တာပင် ကြာပေပြီ။ အသက်ရှစ်ဆယ်နားနီးမှတော့ ပိုနုလျှင်လည်း ဘာထူးတော့မည်နည်း။ အရေပြားတစ်ထောက်စာ အလှဆိုသည်ကို အဖွားနားလည် ပေပြီ။ သေမင်းအတွက် အဖွားက လှနေဖို့ လိုသေးလို့လားဟု စိတ်ပေါက်လျှင် တွေးမိပြီ။ အခုအချိန်မှာသာ ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် သူတစ်ပါးကို အားမကိုးရဘဲနှင့် သွားလာလုပ်ကိုင်ရခြင်းကို အဖွား၏ နုပျိုသောရုပ်ရည်နှင့် လဲလှယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မှာ သေချာနေတော့၏။
Women's World Journal Vol.2Issue 40
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 05:462comments:
အပူအပင်ကင်းတဲ့… ကလေးလေးဘ၀သာ…တခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်။ အပြစ်မသိသေးတဲ့…ကလေးလေးဘ၀ကို… တခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်။၁
“သားလေးက အမေနဲ့ တူလိုက်တာ။ ချစ်စရာကြီး။”
“သားရေ…ကဗျာလေး ဆိုပြလိုက်ပါဦး။ ကဗျာဆိုပြရင် အန်တီက မုန့်ကျွေးမယ်တဲ့။ ဆိုပြလိုက်လေ…။”
“မမ ၀၀ ထထ က။ အကပထမ။ ကပါ ကပါ မမရာ။ ညည လသာသာ။”
“သားရေ အိပ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ ကစားစရာတွေ သိမ်းတော့လေ။ မနက်ဖြန် ကျောင်းသွားရမှာ။ စောစောအိပ်တော့။”
“စောစောအိပ် စောစောထ သွားတိုက် ရေချိူး။”
“သားရေ ညီမလေးကို နေ့လည်မုန့်စားကျောင်းဆင်းရင် သွားကြည့်လိုက်ဦးနော်။ ညီမလေး ထမင်းစားရဲ့လားလို့။”
“မေမေကလည်း ရှက်စရာကြီး။ သားသနပ်ခါး မလိမ်းချင်တော့ဘူး။ ငါးတန်းတောင် ရောက်နေပြီ။ ယောက်ျားလေး ဖြစ်ပြီး သနပ်ခါးလိမ်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းစကြရော။”
“သား ညီမလေးကို စက်ဘီးစီးသင်ပေးရင်းနဲ့ စက်ဘီးပေါ်က ပြုတ်ကျတာ။ ဒူးနည်းနည်းပြဲ သွားတယ်။ မငိုနဲ့…မငိုနဲ့။ ညီမလေးကလည်း မငိုပါနဲ့တော့ တိတ်တိတ်။”
“သား ၀တ္ထုတွေချည်းပဲ ဖတ်မနေနဲ့နော်။ စာလည်းဖတ်ဦး။ စာမေးပွဲနီးနေပြီ။ ဒီနှစ်တော့ အတန်းထဲမှာ ပထမရအောင် ကြိုးစားပါဦး။”
“မေမေရေ… အဲ ဒကာမကြီးရေ… ကိုယ်တော် ပုဇွန်ဆီပြန်နဲ့ ပဲဟင်းလေးစားချင်လို့ ချက်ပေးပါဦးနော်။ ကိုယ်တော် ညကျရင် ဗိုက်သိပ်ဆာတာပဲ။ လိမ္မော်ရည်လေး ထပ်ယူလာပေးပါဦး။”
“သားအတွက်… ဒီမှာ… ဦးထုပ်။ ဒါမှ ကတုံးကို ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းမစရအောင်။”
“ဖေဖေ ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာလေး အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ကြည့်ပေးပါဦး။ ကျွန်တော့် သီချင်းတွေနဲ့ ဂိမ်းတွေတော့ ပျောက်ကုန်ပြီလား မသိဘူး။ စိတ်ညစ်ပါတယ်။”
“မေမေကလည်း ဘောင်းဘီလေး တစ်ထည်ဝယ်ပေးဖို့ကို မျက်နှာငယ်လိုက်တာ။ အဲဒီ brand ကို သားလိုချင်နေတာ ကြာပြီ။ မေမေမ၀ယ်ပေးရင် ဖေဖေ့ကိုပဲ ပူဆာတော့မယ်။”
“ရွှတ်... ရွှတ်…။ သိပ်လှတာပဲ။ တို့ကို နှောင့်ယှက်ခွင့် ပြုပါ။ စကားလေးနည်းနည်း ပြောခွင့်ပြုပါ။”
“မင်းရုပ်ကြီးမှ အားမနာ။ အဲဒီကောင်မလေးကို လိုက်ရတယ်လို့။ နာမည်လေးက ၀တ်ရည်တဲ့။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ချိုနေမှာပဲ။”
“အနီရောင်လေးနဲ့ သူ့အသားက ၀င်းနေတာပဲ။ ဆံပင်ရှည်တာကို သဘောကျတာကွ။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ယဉ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာကွ။”
“မင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တာလဲ ထိုင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာချည်းမှာ အချိန်ကုန်မနေနဲ့။ စာလဲကျက်ဦးကွာ။ စာမေးပွဲက နီးလာပြီ။”
“ကိုယ် တကယ်ပဲ မိုးကို ချစ်တာပါ။ ကိုယ့်ကို မငြင်းလိုက်ပါနဲ့နော်…မိုး။ မိုးမရှိရင် ကိုယ် ဘာဖြစ်သွားမလဲ မသိဘူး။”
“ကိုယ်ညက သီချင်းလာဆိုတာ ကြားရဲ့လား မိုး။ မိုးရယ် အဖြေပေးပါတော့။ ကိုယ်အိပ်လို့လဲ မပျော်ဘူး။”
“မောင်ကလည်း နောက်ကျလိုက်တာ…။ မိုးစောင့်နေတာ ကြာလှပြီ။ နောက်တခါ နောက်ကျရင်တော့ မတွေ့ရတော့ဘူး မှတ်…။”
“မိုးကို ဘယ်တွေ့မလဲ…။ မိုးကနေ ကျော်ပြီး ဆောင်းကို မျှော်နေတာကိုး။ ဆောင်းသဇင်နဲ့ ဆိုရင် မောင်တလောကလုံးကိုများ မေ့နေသလား…။”
“မိုးကလွဲရင် အားလုံး ဖွဲနဲ့ ဆန်ကွဲပဲ။ မိုးရယ်…မောင့်ကို စကားမပြောဘဲ မနေပါနဲ့။ စိတ်မကောက်နဲ့တော့နော်။”
“အိမ်နဲ့ လိုက်တွေ့မယ့်ရက်ကို မောင်ပဲ ရွေးလေ။ မေမေက အိမ်မှာ နေ့လည်စာစားဖို့ စီစဉ်ထားလိုက်မယ်တဲ့။”
“ညီမကို ဒီလောက်ပဲ တွန့်တိုရသလား…မောင်ရယ်။ သတို့သမီး အရံလုပ်ရင်တော့ သတို့သားအရံနဲ့ တွဲရမှာပေါ့။”
“မောင်တော့ ဒီနေ့ သိပ်ပျော်တာပဲ မိုးရာ….။”
လမ်းများက ကိုယ့်ကိုသယ်ဆောင်…ရှေ့မှာ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ မသိဘူး။ နှစ်များက ကိုယ့်ကို စည်းတား သွားချင်တိုင်းလဲ မသွားခဲ့ရဘူး။ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်…ဘာပဲပြောပြော နားမ၀င်နိုင်ဘူး။ အမုန်းနဲ့ အပြုံးတစ်လှည့်စီ ထိတွေ့ ဘာကိုမှလေ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး။၃
“ကျွန်တော်တော့ ဒီခွင်ကို မကြိုက်ဘူးဗျ။ အရင်းအနှီးတွေအားလုံးကို ဒီတစ်နေရာထဲမှာ ပုံအောရလောက်အောင် မဟန်ဘူး ထင်တယ်။”
“မောင်ရေ သမီးကြီးကို ၀င်ကြိုဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။ ဒီနေ့သူတို့ ကျောင်းကား ပျက်နေတယ်။ သမီးငယ်ကိုတော့ မိုးရုံးကအပြန်ဝင်ခေါ်လိုက်မယ်။”
“ဒီတိုက်ခန်းက ဈေးကြီးတာ နေရာကောင်းတာကိုး။ ဈေးနဲ့နီး ကျောင်းနဲ့နီးတဲ့ အပြင် နှစ်လမ်းလောက် လျှောက်လိုက်ရင်ပဲ ကားဂိတ်ကို ရောက်ရော။”
“မေမေ့မြေးကို သိပ်အလိုမလိုက်နဲ့။ မေမေပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးတွေမှန်သမျှ အကုန်သုံးနေတာ တစ်လတစ်လ ငါးတန်းကျောင်းသူနဲ့တောင် မလိုက်ဘူး။ တော်တော် သုံးနိုင်တယ်။”
“တောက်….တော်တော် လူပါးဝတဲ့ ကောင်တွေ။ မင်းတို့ထက်သာလို့ ငါဆရာကြီးလုပ်နေတာကွ။ မနေ့တစ်နေ့ကမှ စီးပွားရေး စလုပ်တဲ့ကောင်တွေကများ…။”
“မိုးရေ မောင်တို့ ၀ယ်လိုက်တဲ့ မြေကွက်ဈေးတက်လို့ ပြန်ရောင်းလိုက်တာ တော်တော်မြတ်တယ်ကွ။ အဲဒီအထိမ်းအမှတ်နဲ့ ညနေစာ သွားစားကြရအောင်။ ကလေးတွေကိုလဲ ခေါ်လိုက်ဦး။”
“ကျွန်တော်တို့ နေရာက အကွက်အကွင်းကောင်းတယ်။ သူတို့ထက် သာမှာပါ။ အရင်းအနှီးကောင်းကောင်း ရှိရင် ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တာပဲ။ ကျွန်တော်ပြောသားပဲ။”
“သမီးတို့ရေ ဖွားဖွားနဲ့ ဖိုးဖိုးကို သွားကန်တော့ကြမယ်။ ဟိုနေ့က မေမေ၀ယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ သွားယူလာပါဦး။ အေး…ဟုတ်တယ်…အဲဒီဟာ ဖွားဖွားတို့ကို ကန်တော့ဖို့။”
ပါးစပ်ပိတ်…ခေါင်းညိတ်…ကြိတ်မှိတ်…ငါနားလည်ပေးမယ်။ ဖြည်း… ဖြည်း… ဖြည်းဖြည်းပြော…နားနားပြီးပြော…မောမယ်။ တိုး…တိုး…တိုးတိုးလေးပြော…အားလုံးလည်း ကြားပါတယ်။၄
“သမီးကို ဖေဖေဘာပြောထားလဲ။ ဒီကောင်လေးနဲ့ မတွဲပါနဲ့လို့ အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးထားတယ်နော်။ နောက်တခါတွေ့ရရင်တော့ မလွယ်ဘူးမှတ်။”
“ခင်ဗျားတို့ထက် ကျုပ်နားလည်လို့ ပြောနေတာဗျ။ ကျုပ်ကို ဆရာလာမလုပ်နဲ့။ ကျုပ်သဘောနဲ့ ကျုပ် ဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။”
“မိုး…မင်းကိုငါ ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲ။ ဒီမိန်းမကို ပိုက်ဆံ မချေးပါနဲ့လို့ ငါအကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့တယ်နော်။ မင်းက သနားပေမယ့် ငါကတော့ မသနားနိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံဆိုတာ အပင်ပေါ်ကခူး ယူလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ တွင်းထဲကနေ နှိုက်ယူလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။”
“ငါအသက်ကြီးပေမယ့်လဲ မနားနိုင်သေးဘူး။ ဒီအလုပ်တွေကို ငါမှ မလုပ်ရင် ဘယ်သူလုပ်မလဲ။”
“စိတ်လျှော့ မောင်…စိတ်လျှော့…။ ဒေါသတွေ သိပ်မကြီးပါနဲ့။ ရှင့်ကို ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ကြောက်လာပြီ။”
“မင်းတို့ အားလုံးတစ်ယောက်မှ အသုံးမကျဘူး။ ဒီတာဝန်လောက်ကိုမှ မယူနိုင်ရင် အလုပ်ဆက်မလုပ်နဲ့တော့။ ငါသေသေချာချာ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ကွာ…။ ငါ့ရှေ့က အားလုံး ထွက်သွားကြ…။ သွားကြကွာ…..။”
“တောက်…..ငါ့ပြိုင်ဖက်ကိုမှ အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်လို့။ ငါ့ရာဇ၀င်မှာ ဒါမျိုး မရှိဘူး။ ငါ့အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိစေရမယ်…။ ဘယ်ကောင်မှ ငါ့ကို ကြောလို့ မရဘူးကွ။”
“တပည့်တော် ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ဘုရား။ ဒေါသတွေ သိပ်ကြီးပြီးတော့ သွေးတက်တယ် ဆိုတာလဲ ဟုတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ ဖိစီးမှုတွေ သိပ်များလို့လဲ ပါတာပေါ့ ဘုရား။”
“ဒီလောက် မိုက်တဲ့ သမီး သူ့ထိုက်နဲ့ သူ့ကံပဲ ဆိုပြီး ပစ်ထားတာ။ ကြိုက်စရာလူ ဒီလောက်ရှားသလား။ ဒီကောင့်ကို ငါနည်းနည်းမှ ကြည့်လို့ကို မရဘူး။ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်…ကလေက၀ကောင်။ ငါ့သမီးနဲ့ နည်းနည်းမှ မတန်ဘူး။”
“ဒီနေ့ လှူလိုက်ရတာ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သီလယူလိုက်ရတော့ စိတ်ကြည်လင်သွားတယ် မိန်းမရယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းမှု ကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့ ကြိုးစားရဦးမယ်။ ကိုယ့်မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတာကိုး။”
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ…မူးမိုက်လဲကျ…ဘယ်လိုလှုပ်လို့ မရ…သိပ်လေးလံတဲ့ ငါ့ခန္ဓာ…။ ….အော်သံခေါ်သံတွေ ခေါ်သံတွေကြား…အော်သံခေါ်သံတွေ ခေါ်သံအော်သံတွေလား…။ ငါမမြင်နိုင်ဘူး…ဒီအမှောင်ထုထဲမှာ…။ ငါမခေါ်နိုင်ဘူး… အသံတွေ မထွက်တော့ပါ…။၅
“မေမေကလည်း ရှက်စရာကြီး…….သားသနပ်ခါး မလိမ်းချင်တော့ဘူး……မမ ၀၀ ထထ က…...နာမည်လေးက ၀တ်ရည်တဲ့……အိမ်နဲ့ လိုက်တွေ့မယ့်ရက်ကို မောင်ပဲ ရွေးလေ……မောင်တော့ ဒီနေ့ သိပ်ပျော်တာပဲ မိုးရာ……ငါ့ရာဇ၀င်မှာ ဒါမျိုး မရှိဘူး……ငါ့အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိစေရမယ်……ငါ့သမီးနဲ့ နည်းနည်းမှ မတန်ဘူး……ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းမှု ကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့ ကြိုးစားရဦးမယ်……ပိုက်ဆံဆိုတာ အပင်ပေါ်ကခူး ယူလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး……ကိုယ် တကယ်ပဲ မိုးကို ချစ်တာပါ……ကျုပ်သဘောနဲ့ ကျုပ် ဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်……ဘယ်ကောင်မှ ငါ့ကို ကြောလို့ မရဘူးကွ……”
နောက်ဆုံးကြားလိုက်ရသည်မှာ ငိုသံများ။ အသံတွေနဲ့ ၀င်လာပြီး အသံတွေနဲ့ပင် ပြန်ထွက်သွားရသော ပြဇာတ်တစ်ပုဒ် ကားလိပ်အချ။ နောက်တော့….
မှတ်ချက်။ ။အောက်ပါ သီချင်းများကို ၀တ္ထုထဲတွင် ယူသုံးပါသည်။
တေးဆို-စိုင်းထီးဆိုင်၊ တေးရေး- စိုင်းခမ်းလိတ်
တေးဆို- စိုင်းထီးဆိုင်၊ တေးရေး- စိုင်းခမ်းလိတ်
တေးဆို- မျိုးကြီး၊ တေးရေး- မောင်မောင်ဇော်လတ်
တေးဆို- လေးဖြူ၊ တေးရေး- မောင်မောင်ဇော်လတ်
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:344comments:
“ဟုတ်တယ်…။ မအိပ်ချင်တော့လို့။ ညည်းကတော့ လှုပ်တောင် မလှုပ်ဘူး။”
“အံမယ်…ညည်းကပဲ ပြန်ပြောရတယ် ရှိသေး။ ခါတိုင်းတော့ ညည်းပဲ နေဖင်ထိုးအောင် အိပ်ပြီးတော့။”
“အသက်ကြီးလာလို့လား မသိဘူး။ အရင်ကလောက် ကြာကြာမအိပ်နိုင်တော့ဘူး မိန်းမရဲ့။”
“မနက်စာ စားရအောင်။ ဘာစားကြရင် ကောင်းမလဲ။ ယောက်ျား စောစောထတာ တစ်ခုခု မလုပ်ထားဘူးလား။”
“ကျောင်းအစ်မ ထလာရင် သောက်ရအောင် ကော်ဖီက အသင့်ဖျော်ပြီးသားပါ ခင်ဗျ။ အစားအသောက်ကတော့ ကျုပ်လည်း မစီစဉ်တတ်ဘူး။”
“အလကားနောက်တာ။ မနေ့က ကျုပ် ခရိုဆွန့် ၀ယ်လာတယ်။”
“ဟား…ကောင်းတယ်။ အတော်ပဲ။ ကျုပ်စားချင်နေတာ ညည်းက ဘယ်လိုသိ။”
“အမြဲတမ်း စားချင်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ မှန်းရတာ မခက်ပါဘူး။”
“အဲဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။ စကားမများနဲ့တော့ ကော်ဖီသောက် မုန့်စားရအောင်။ ဗိုက်ဆာပြီ။ ညည်းမနိုးသေးလို့ ကျုပ်ကစောင့်နေတာ။”
“နွားနို့တွေ သိပ်မထည့်နဲ့နော်။ အဆီတက်တယ်။”
“ပဲများလိုက်တာ။ သောက်မှာသာ သောက်စမ်းပါ။”
“အသက်ကလေး နည်းနည်း ရလာရင် ၀ိတ်တက်တာ မြန်တယ် ယောက်ျားရ။ အစားအသောက် ဆင်ခြင်မှ။”
“ဒီနေ့ ပိတ်ရက် ဆိုတော့ ဘယ်သွားချင်လဲ။”
“ဘယ်မှ မသွားချင်ဘူး။ အိမ်မှာပဲ အေးဆေး နေကြတာပေါ့။ ညည်းသွားချင်တဲ့ နေရာရှိရင်တော့ သွားမယ်လေ။”
“ကျုပ်ကလည်း သွားချင်ပါဘူး။ အိမ်မှာ အေးဆေး စာအုပ်လေး ဖတ်၊ သီချင်းလေး နားထောင်။ ဟင်းချက်စား အဲဒါပဲ ကောင်းတယ်။ ညနေကျတော့ လမ်းလျှောက်ထွက်မယ်လေ။”
“မနေ့က ဟိုကလေး လင်မယားကတော့ ခေါ်သား။ သူတို့ ဒီနားမှာ လှေလှော်သွားမလို့တဲ့။”
“မလိုက်ချင်ပါဘူး။ ပိတ်ရက်ကျရင် အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်တယ်။ ဟိုသွားဒီသွားက ပျော်တော့ ပျော်ပါရဲ့။ ငယ်တုန်းကလောက်တော့ စိတ်အားမထက်သန်တော့ဘူး။ လူပင်ပန်းတယ်။”
“ညည်း အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဖက်တီးမ ဖြစ်နေတာပေါ့။”
“အောင်မယ်…။ညည်းကျတော့ သုံးလဗိုက်လောက် ရှိတာများ။ လာမယှဉ်စမ်းပါနဲ့။”
“အသက်ကြီးပြီ မိန်းမရ…။ ဗိုက်ကလေးလည်း စပြီး ရွှဲလာပြီလေ။”
“စကားမစပ်…ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ သိလား။”
“ဘာနေ့လဲ ဟုတ်လား။ စနေနေ့ပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။”
“ဟင့်အင်း။ ဘာနေ့ မို့လို့လဲ။”
“အသက်မကြီးချင်လို့ မေ့ထားတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။”
“တကယ့်ကို သတိမရတာ မိန်းမရဲ့။ အသက်ကြီး ပြီလေ။”
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:45 No comments: